Minnesota: Somali Kale oo Maxkamadi Xukuntay
Maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis ee gobalka Minnesota, ayaa 4 qof oo kale oo Soomaaliya ku xukuntay xukunno xabsi ah, ka dib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen dhalinyaro ka tagtay Minnesota oo ka soo dagaalantay Soomaaliya.
Seddex ka mid ah dhalinyaradan ayaa lagu xukumay min seddex sano oo xariga ah, halka kan afraadna lagu xukumay 12 sano oo xarig ah.
Dhalinyarada ay maxkamaddu xukunada ku riday ayaa kala ah. Cumar Cabdi Axmed oo 28 sano jir ah, waxaana lagu xukumay 12 sano oo xarig, iyadoo lagu helay denbi ah inuu hormuud ka ahaa abaabulka dhalinyaro Soomaaliya u tagtay inay la dagaalamaan ciidamadii Ethiopia ee sanadkii 2007dii galay Soomaaliya.
Cabdifitaax Yuusuf Ciise oo 29 jir ah ayaa lagu xukumay sedex sano oo xarig ah, waxaana lagu eedeeyey in Soomaaliya uu tagay sanadkii 2007dii, isagoo iibsaday qorey AK 47 ah islamarkaana qaatay tababarro dagaal, ka dibna uu isaga soo cararay Soomaaliya.
Saalax Osmaan Axmed oo 30 jir ah ayaa isna waxaa lagu eedeeyey inuu tagay wadanka Soomaaliya uuna qaatay tababar ah, sida loo adeegsado hubka ka hor intii aanu Soomaaliya isaga soo cararin.
Axmed Xuseen Maxamuud oo 28 jir waxaa isna lagu xukumay seddex sano oo xarig ah, waxaana uu qirtay in sanadkii 2012kii uu aruuriyey lacag dhan 1,500 oo doolar oo lagu caawiyey dhalinyaro loo diray Soomaaliya kuwaasoo ka mid noqday kooxda Al-Shabaab.
Maaliintii Isniinta ayaa maxkamdda Minneapolis waxa ay xukuntay laba nin oo lagu kala xukumay min 10 ilaa 20 sano oo xarig ah, waxaana tirada la xukumay ay haatan mareysaa lix qof. Maalinta khamiista ahna waxaa ay maxkamaddu go’aan ka gaari doontaa laba haween ah oo iyagana lagu eedeeyey inay xiriir la lahaayeen kooxda Al-Shabaab.
Warbixinta oo dhan halkan ku soo ka dhageyso.
Warbixinta Xukunka Maxkamadda